Times Of Nepali » सावधान ! मुलासँग कहिल्यै नखानु यी ४ कुरा
02 10 20 |
सावधान ! मुलासँग कहिल्यै नखानु यी ४ कुरा
मुला प्रायः हरेकको भान्सामा रहने तरकारी हो । कहिले सलादको रुपमा कहिले अचार त कहिले मुलाको परौठा र तरकारी समेत बनाएर खाने गरिन्छ ।
यति मात्रै होइन मुला सेवनले पाचन प्रणाली राम्रो बनाउने आम विश्वास पनि छ । तर कतिपय तरकारी र फलफूलसँगै मुला खाएमा स्वास्थ्यमा गम्भीर हानी पुग्ने अध्ययनहरुले देखाएका छन् । निम्न उल्लेखित तरकारी, फलफुलसँगै मुला नखान चिकित्सकहरूको सुझाव छ ।
हुन: त दुधलाई कहिल्यै पनि नुनिलो र अमिलो वस्तुसँगै खानु हुँदैन। साथै मुला मिसाएर पकाएको तरकारी सेवन गरिरहेको बेला पनि दुध पिउनु हुँदैन ।
मुलामा भएको तत्व र दुधमा भएको तत्वको मिश्रणबाट छालासम्बन्धी रोग उत्पन्न हुनसक्छ । मुलाबाट बनेको खानेकुरा खाएको कम्तिमा दुई घण्टापछि दुध पिउन अनुशन्धानकर्ताहरुको सुझाब छ।
“म संग एक रात सु’त्नुहोस तपाइको ‘गुन’ तिर्न अरु छैन” / भिडियो
नेपाली सेनामा विभिन्न पदमा नयाँ भर्ना खुल्यो (हेर्नुस् सूचना सहित)